Ngubani laphaya owake yango intombazane kunabo kubo noma guy a esifushane kuka kubo? Kanjani go? Ingabe kunzima noma nje ntofontofo? Lo magazini ubulokhu ezimangalisayo the dating yesehlakalo okwesikhashana manje, njengoba abanye bekholelwa abantu akufanele usuku amantombazane kunabo kubo noma guys esifushane kuka kubo. Sekuyisikhathi okusezingeni lokhu theory kwaba demystified amaqiniso!
Kulungile, ukuze mhlawumbe kwakungase kancane sezimiso bazizwa eguqa phansi ukuqabula insizwa lesifisha ngoba Kukholakala ukuthi guys kufanele zibe zinde? Kodwa ingabe leyo ukubusa sivelaphi? Ingabe lokho kusho ukuthi guys short namantombazane abade akufanele nanini uphola ngenxa nje imithetho in the dating scene?
Kuthiwani uma intombazane abade uthanda guy iDemo kanye noHezekeli? Kufanele sonke ubilise phansi esikuthandayo njengoba kukhona nalabo empeleni bathanda amantombazane mude futhi guys mfushane, kukholwe noma ungakukholwa! Futhi abantu abanjalo ngeke zihambe dating yabo, kungakhathalekile ukuthi abanye bathi.
Njengoba nje umfana nentombazane kamnandi ukuphakama nomunye, ke akekho omunye unelungelo bazame ukuphoqelela imibono yabo phezu kwabo. Kuyadingeka ukuba le theory demystified njengoba kusho abanye bathi ukuthi kulula ukukusho kunokukwenza, wanezela ukuthi guys kuthiwa zakheka njalo zibe zinde ukwedlula amantombazane, futhi ngeke uzizwe unamahloni njalo uma zimfushane.
Kuthiwa guys ngeke ngempela amazwana, kodwa abanye Amaphuzwakhe benza kuzoveza ukuthi ungazizwa kahle they are intombazane abade. Kwakungakaze khona lutho ezikhangayo mayelana guy ngubani ukungaqiniseki ngezinkolelo ngokwabo.
Ukuzethemba njalo kudlala indima enkulu ezimweni ezinjalo. Njengoba nazo babe kuze kube yimanje, ke guys iDemo kufanele ngesikhathi esifanayo ngaba nokuzethemba esikhunjeni sabo siqu futhi yekani ukukhathazeka mayelana kwawo. Lokhu kungaba amaphuzu ngisho nabo usuku nalelo girl amade ababengethande fancied, kodwa ngicabange ayephuma nabo ngenxa yokuphakama kwabo.
Ngempela, girls abade akufanele smile nje kodwa njengoba nabo babe izinto ezimbalwa ukufunda ngokwabo. Yabhalwa a guy elifushane akukuniki ilungelo Abasunduzani ukuphakama ukuntula kwabo phansi semphinjeni wabo. Nika guy a break, hard yayo ngokwanele kokuba tiptoe ukuze ngikunike ube kiss!
Tall, dark, futhi handsome akudingeki kube evamile. Njengoba okuningi njengoba ukuphakama yinhle, akufanele sibe isici sinquma uma kukhona izici ukuthi athinta.
Musa zaphetha ukuphakama, usuku umuntu! Kungenzeka ukuthola insizwa mude, kodwa ubuntu noma ngisho sengqondo nenkundla ipea. Same uya for the girls. Ukuphakama kufanele kuphela kube isici minor, hhayi isici sinquma. Uma omunye kwenzeka kuze kube umuntu ukuphakama bethanda, kuhle. Uma kungenjalo, kusenzima kuhle.
Kulabo ababeka ukuphakama njengoba kuqala lapho ngifuna dates, ke kufanele ucabange bona kuqala njengoba kungenzeka yibo abanenkinga. Height ngeke ilawulwe, kodwa sengqondo can. Mhlawumbe lokhu kuyindlela nje ukuba lesi theory of girls mude kanye guys mfushane demystified.
© Copyright 2017 Usuku My Pet. Made by 8celerate Studio
Kukhona isayensi ukuphola. Ukuphila ukuphola ingafaniswa sokuhlolwa chemistry lapho ufisa wena ...